खैरे जस्तै देखिने भाईले गाउछ्न यति मिठो गीत, तहल्कै म’च्चाए ! हेर्ने सारा च’कित,खैरे भन्दा चित्त दुख्छ – Onlines Time
January 25, 2021 January 25, 2021 onlinestimeLeaveaComment on खैरे जस्तै देखिने भाईले गाउछ्न यति मिठो गीत, तहल्कै म’च्चाए ! हेर्ने सारा च’कित,खैरे भन्दा चित्त दुख्छ
खैरे जस्तै देखिने भाईले गाउछ्न यति मिठो गीत, तहल्कै मच्चाए ! हेर्ने सारा चकित,खैरे भन्दा चित्त दुख्छ
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती नदीमा बनेको देशकै दोस्रो लामो पुलको उद्घाटन भएको छ । जिल्लाका राप्ती र गढवा गाउँपालिका जोड्ने राप्ती नदीमा बनेको पुलको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार एक समारोहका बीच उद्घाटन गरेका हुन् ।
राप्ती नदीमा एक वर्ष पहिले निर्माण पूरा भएको उक्त पुलको सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले उदघाटतन गरेरसँगै पुलले औपचारिकता पाएको छ । पुलको शिलान्यास तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७३ मंसिर २२ गते शिलान्यास गरेका थिए ।
राप्ती गाउँपालिकाको छोट्की सिसहनियाँ र गढवा गाउँपालिकाको महदेवा जोड्ने उक्त पुल करिब एक अर्ब रुपैयाको लागतमा पुल विभाग सेक्टर नेपालगञ्जले निर्माण गरेको हो । पुलको लम्बाई ८६० मिटर छ भने चौडाइ साढे १० मिटर रहेको पुलको एएनके लुम्बिनी वाइपी जेभी कम्पनीले निमार्ण पुरा गरेको छ ।
निर्माण समय भन्दा चार महिना पहिले नै पुलको निर्माण पुरा गरेको कम्पनीले बताएको छ । सोही कम्पनीले यसअघि नेपालकै सबैभन्दा लामो एक हजार १५ मिटरको पुल निर्माण गरेको थियो । जुन बर्दियामा पर्ने गेरुवाको पुल हो ।
पुलको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देश अघि बढिसकेको र अब त्यो गतिलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताएका छन । उद्घाटन पछि संक्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई प्रक्रिया र प्रणालीमा लैजान खोज्दा समस्या भएको भन्दै देशको गति नरोकिने बताए । उनले सुशासन र विकासको प्रत्याभूति दिलाउने गरी सरकारले विकास निर्माणका कामहरु गरिरहेको बताए ।
exclusive तनहुमा छोराले गरे आमाको ह#त्या ! रह’स्य सुन्दा सबै चकि’त, स्थानियले खोले बास्तविकता
हे दैव..शिशिर भण्डारीले सबैलाई हात जोडेर बिन्ती गरे । सबैले यो भिडियो हेर्नुहोला, शेयर गरिदिनुहोला (सहयोग स्वरुप सेयर गरिदिनु होला)